धुर्मु सुन्तु ! तिमीहरु हाम्रो प्यारो नेता बनेर किन जन्मेनौ ? - Vision Nepal TV
Published: May 18, 2016 | 4:01 pm | बुधबार, जेष्ठ ५, २०७३ | ५०९ २ पटक पढिएको
श्रद्धाका सलामीहरु अनि धेरै धेरै माया !
हिजो तिमीहरु दुबैले डोकोभरी ढुंगा बोकेको टेलिभिजनमा देख्दा यस्तो लाग्यो म पनि नेपालमै भएको भए तिमीहरुको पवित्र काममा कति ऊर्जा दिँदै होस्टेमा हैँसे मिलाउने थिएँ होला ! तिमीहरुले बोकेको डोको उठाईदिएर बोझ हल्का पारिदिन्थे होला । तर टाढाको भूगोलमा भएकोले प्रशंसा र सहानुभूतिले मात्र चित्त बुझाउँदै छु ।
अचेल म निरन्तर चिठ्ठी लेखिरहेको छु : राजनीतिका मुख्य-मुख्य पात्रहरुलाई तर पनि उपलब्धि शून्य प्राय: छ । राजनीति बिग्रिएको छ । उही कुरा क्षणमै सेतो र क्षणमै कालो भईरहेको छ । सबैजना आफ्नो पोल्टा भर्ने बेलामा तिमीहरु त फेरि भग्नावशेषको बस्ती गिरान चौर पो पुगेछौ । गिरेका घरहरु र मनहरु ठाडो पार्न अनि तिनीहरुकै बारेमा मैले लेखिन भने मेरो कलमको धर्म कसरी पूरा हुने भो र ! त्यसैले मध्यरातमा जागेर तिम्रैबारे केही प्रशंसा त केही समानुभूति र शुभकामनाका वाक्यहरु कोर्न खोजिरहेको छु ।
साँच्चै ! तिमीहरु त बडो बलवान पो रहेछौ, महाभारतको पात्र भिमले जस्तै डोकोभरि ढुंगा बोक्न सक्ने ! तिमीले ढुंगा बोक्दै गर्दा न मैले कुनै अभिनय देखेँ न त कुनै अभिमान । बरु देखेँ त तिमीहरुको दृढ लगनशीलता र अन्तरमनको त्याग । सायद राजनीतिज्ञ हुन्थे भने घाँटीभरि माला र खादाले सजिएर रिबन काट्दै गर्थे होला । अथवा दुईचार वटा घर बनाउन पुग्ने रकम हेलिकोप्टर र भत्तामा खर्च गर्थे होला । साँच्चै आज गर्व लाग्छ तिमीहरुबारे लेख्दा । मेरो कलम पनि कति प्रफुल्ल भईरहेको छ । कलमले पनि आज आफैलाई भाग्यमानी ठानिरहेको छ ।
म तिमीहरुको यो परोपकारमा भौतिक रुपमा त सहभागी हुन सकिन तर नैतिक र आर्थिक रुपमा सहभागी हुन भने अवश्य चाहन्छु । म चाहन्छु गिरान चौरमा मेरो पनि पसिनाले मुछेर बनेका केहि ईटहरु थपिऊन्, म मात्र हैन म जस्ता विदेशमा बसेर पनि हर क्षण नेपाल देख्ने र दुख्ने मनहरुका पनि पनि रगत र पसिनाले मुछेर हार्दिकताले पकाएका ईटहरु थपिऊन् भन्ने मेरो आशय हो ।
हो, तिमीहरुले ढुंगा मात्र कहाँ हो र चुनौतिको पहाड उचालेका छौ । ढलेका मन उचालेका छौ । देशको लागि केहि गर्न नसक्ने नालायक नेतृत्वहरुलाई नैतिक झापड हुने गरी एउटा गतिलो संकल्प उचालेका छौ । विदेशिएका आधा करोड युवाको तर्फबाट म तिमीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रशंसाका गुच्छाहरु अर्पण गर्न चाहन्छु । र तिमीहरुको पवित्र कामको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु ।
हो धुर्मु/ सुन्तु, तिमीहरुको सोच महान् थियो । भुकम्पले आफन्त गुमाएको बेला जनता हँसाउनु उचित हुने थिएन । मान्छेहरु घरबारविहिन भएको बेला विदेश घुम्नु उचित थिएन । त्यसैले तिमीहरु अमेरिकाबाटै फर्क्यौ, मान्छेको सपनाको देशबाट फर्क्यौ र घाईतेहरुको मलहम पट्टि गर्न तल्लीन भयौ, त्यसैले त सबैको प्रिय बन्यौ ।
तिमीहरु एउटा गरीबको बस्ती बनाउन यति अटल भईरहँदा सरकारमा बसेकाहरु भागबन्डामै बितन्डा मच्याएको देख्दा यस्तो लाग्छ, धुर्मु/ सुन्तु ! तिमीहरु हाम्रो प्यारो नेता बनेर किन जन्मेनौ ? साँच्चै तिमीहरुले बनाएको बस्तीजस्तै हामीले भोगेको राजनीति पनि नमूना भईदिएको भए ! यहाँको असक्षम नेतृत्व र फोहोर राजनीतिले भत्काएका मनहरु तिमीले कसरी पुनःनिर्माण गर्ने थियौ होला ? तिमीहरुकै निगाहले गर्दा धेरै भत्किएका मनहरुले यो दशैँमा आफ्नै घरमा बसेर टीका थाप्दा पाएका आशिर्वादहरुले तिमीहरुलाई कति भाग्यमानी बनाउला है । त्यो बस्तीमा आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गरेर धेरै परोपकारी मनहरुले केहि न केहि आशिर्वाद पाऊन् भन्ने मेरो पनि चासो हो ।
अन्तमा तिमीहरुको आदर्शले कहिल्यै नहारोस्, तिम्रो पवित्र समाजसेवामा कसैले औला नठड्याओस् र तिमीहरुको यो पुण्य कामलाई गिरानचौर मात्र हैन हरेक सहृदयी मनहरुले सधैभरि संझिरहने छन् । तिमीहरु अहोरात्र खटिरहँदा राज्यका सरोकारवाला निकायको तन्द्रा भंग होस् भन्दै तिमीहरुको पवित्र कामको सफलताको लागि लाखौँ लाख कामना गर्दछु । सहयोगी मनहरुलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न यो लिंक पनि शेयर गरेको छु ।
५०९ ३ Total Views ३ Views Today
← अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गोष्ठीको तयारी पूरा
मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल अन्वेषण सुरु, प्रारम्भिक लक्षण ‘आशालाग्दो’ →
आजको नाग पञ्चमी र यसको परम्परा
आन्दोलनका लागि तयार रहन ओलीको निर्देशन
लोडसेडिङ हुनुमा माधव कुमार नेपाल दोषी